नायिका साम्राज्ञीको बिरुद्द कड्किएका सोभित बस्नेत लाई साम्राज्ञीले फर्काईन यस्तो कडा जवाफ ,हेर्नुहोस भिडियोमा – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/नायिका साम्राज्ञीको बिरुद्द कड्किएका सोभित बस्नेत लाई साम्राज्ञीले फर्काईन यस्तो कडा जवाफ ,हेर्नुहोस भिडियोमा
नायिका साम्राज्ञीको बिरुद्द कड्किएका सोभित बस्नेत लाई साम्राज्ञीले फर्काईन यस्तो कडा जवाफ ,हेर्नुहोस भिडियोमा
ईटहरी/ नेपालि सिने नगरी यतिबेला विवाद र आलोचनाको भुमरीमा मज्जैले फसेको छ । एक पछी अर्को कलाकार विवादमा तानिदा अब सिने नगरीको बाटो कता भन्ने प्रश्न खडा हुन थालेको छ । केहि साता देखि चर्किएको र पछिल्लो समय साम्य हुदै गएको साम्राज्ञी-भुवन काण्ड फेरी चर्चामा आउने देखिएको छ । विभिन्न अन्तरबार्तामा यस बिषयमा अभिव्यक्ति दिदै गरेका सोभितको कुरालाई लिएर साम्राज्ञी फेरी बोलेकी छन् ।
सोभिताले एक अन्तरबार्तामा साम्राज्ञीलाई गलत भन्दै भुवनको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका थिए । यद्धपि उनले यसअघि देखि नै भुवनको समर्थनमा बोल्दै आएका थिए । सोहि अन्तरबार्ता हेरेपछि साम्राज्ञीले सोभितालाई जवाफ फर्काएकी छन् । तर उनले फर्काएको जवाफ भने भुवन केसी संग चलेको काण्डमा भने हैन । हेर्नुस साम्राज्ञीले फर्काएको जवाफको भिडियो
शोभितले केहिदिन अघि युट्युबमा सार्बजनिक एक अन्तरबार्तामा नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको उक्त विवादको बारेमा बोल्दै भनेका थिए–‘विरगञ्जमा रिक्सा चढेर हिड्ने मान्छे अहिले भूवन केसीकै कारणले गर्दा कार चढेर हिड्ने भएकी छिन् । भूवनकै कारणले ‘ड्रिम्स’बाट स्टार भएको मान्छेले अहिले उनैलाई आरोप लगाउन मिल्छ ?’ उनको यहि अभिव्यक्तिको साम्राज्ञीले जवाफ फर्काएकी हुन् ।
साम्राज्ञीले जवाफ फर्काउदा सोभितको नाम त तोकेकी छैनन् तर, जवाफ सोभितकै लागि हो भन्ने प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ । उनले जवाफ दिदै भनेकी छिन्–‘एक जना मानिसले मैले विरगञ्जमा रिक्सा चढेर हिड्थ्यो भन्नुभएछ । म उहाँलाई त व्यक्तिगत रुपमा चिन्दिनँ । तर, उहाँको छोरा मेरो राम्रो साथी हो । हो, म विरगञ्जमा रहँदा रिक्सा चढ्थेँ । यसपछि, म दिल्लीमा बसेर पढेँ । अहिले काठमाण्डौमा छु । ठूला–ठूला कार चढौं कि के गरौं त्यो मेरा कुरा हो । रिक्सा चढ्दैमा मान्छे सानो हुन्छ र ?’
उनले ‘कस्तो सस्तो सोचाई’ भन्दै अगाडि भनेकी छिन्–‘मेरो साथी निकै राम्रो मान्छे हुन् । तर, उनको पिताको कस्तो सस्तो मानसिकता हो ?’ उनले आक्रोशित हुँदै भनिन्–‘म रिक्सा चढौं कि, टेम्पु चढौं कि, कार चढौं कि ? यसले मलाई सानो र ठूलो बनाउँछ त ? कस्ता कस्ता मानिसहरु मेरो विरुद्धमा बोलिरहेका छन् ?
कुवेतबाट फर्किएका १०३ मध्ये ९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
भाइटिका लगाउन जाँदा १३ वर्षकी अध्यक्षकी छोरीको अरिङ्गालले टोकेर मृ’त्यु
सुनमा भारी गिरावट : एकै दिन ६ ,२०० ले घट्यो सुन , चाँदीमा २२५ रुपैयाँ